नयाँ वर्षलाई सेयर बजारको स्वागत, बजार ४.७० अंकले बढ्यो — Bhugolnews
नयाँ वर्षलाई सेयर बजारको स्वागत, बजार ४.७० अंकले बढ्यो
काठमाडौं । नयाँ बर्षलाई सेयर बजारले स्वागत गरेको छ ।
वर्ष २०७६ को दोस्रो दिन (बैशाख २) सेयर बजारमा हरियाली देखिएको छ । बजार ४.७० अंकले बढेर ११८८.७१ बिन्दुमा अडिएको छ । यद्यपि कारोबार रकम भने खासै बढेको छैन । यस दिन ३० करोड ४५ लाख ७६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
कारोबामा १६५ कम्पनी सामेल भए । आज बैकिङ समुह (५.८९ अंक), होटल समुह (२२.४९ अंक), विकास बैंक समुह (४.१३ अंक), निर्जिवनबिमा समुह(६.९५ अंक), उत्पादन तथा प्रशोधन समुह (१०.३५ अंक) र माइक्रो फाइनान्स समुह (४२.४४ अंक) मा हरियाली छाएको छ ।
यता जलविद्युत, फाइनान्स, जीवन बिमा समुह र अन्य समुहमा भने गिरावट आएको छ । आज सबैभन्दा बढी नेको इन्सुरेन्सको कारोबार भएको छ । नेकोको २ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कुमारी बैंकको १ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
सुनको भाउ घट्यो, कति छ आज ?
सुनचाँदीको भाउ कति छ आज ?
राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुको साथ, कुन बैंकको कस्तो अफर ?
पाँचतारे होटल मेरियट काठमाडौं आजदेखि सञ्चालन
सुनको भाउ बढ्यो, आज कतिले हुँदैछ कारोबार ?